Ogaden News Agency (ONA) – Dood ka Dhalatay Aqoonsigii Sweden Dawladnimada Falastiin oo Lagu soo Qaaday Qadiyadda Ogadenya
Dood ka Dhalatay Aqoonsigii Sweden Dawladnimada Falastiin oo Lagu soo Qaaday Qadiyadda Ogadenya
Posted by ONA Admin	/ November 5, 2014
Iyadoo fikrada gumeystuhu aduunka uu kasii dhamanaayso isla markaana aduunka uu u doodayo xuquuqda shacuubta dulman ee gumeysigau in badan daahsaday.
Dowlada Sweden ayaa isbuucii lasoo dhaafay sheegtay in ay aqoonsatay Falastiin dowlad nimadeeda. Arinkaas ayaa Israel si aad ah ugu careysiiyay iyadoo xiriirkii diplomaasiyadeed uu sii xumaanayo ereyo kululna hawada la isku marinayo.
Sidaas si lamid ah ayaa waxaa guud ahaan ka socday doodo arimahan ku saabsan oo la isku marinayo xaga meediyaha qeybihiisa kala duwan. Doodaha ayaa iskugu jira kuwa quseeya Falastiin & Israel, iyo waliba kuwo badan oo looga hadlayo wadamada kale ee gumeysiga wali ku jira iyo dhulal badan oo lagu wada muransan yahay.
Maalinamadii Isniinta 3di Nov 2014 ayaa waxaa joornaal kasoo baxa magaalada Eskilstuna-Sweden lagu qoray mowduuc looga hadlayo wadamada shacabka aanan rabin xooga iyo cadaadiska ku haysta isla markaana muranka kaa dhaxeeyo, waxaana tusaale ahaan loo soo qaatay Inida iyo Pakistan arinta Kashmir, Somalia & Ethiopia (Ogaden). Arinta Ogaden ayaa aheyd arinka mowduuca loogu soo qaatay iyo sida Gumeystaha Ethiopia ay ugu dhagan tahay wadankas iyo waliba saameynta ay Somalia ku yeelatay arinkaas. Hadaba qadiyada Ogadenia ayaa noqotay mid inta badan media ah lagu soo qaato markii arimaha nocan oo kale ah laga doodayo.
ONLF iyo shacabka Somalida Ogadenia oo is kaashanaya waxay guul ka gadheen in qadiyada Ogadenia caan ka noqoto wadamo badan oo calamka ka mid ah . khubaro badan oo siyaasada Swedenka faalooda waxay aminsanyihin in aqonsiga Falstina ay wado u furayso shucuub badan oo dulman , waxaa ayaduna muhiim ah in dawladay Swedenaqonsato ama u ololayso in wadamo badan oo rer Yurub ah ku dayanayan gar ahaan wadamada Swedendariska la ah oo ay siyaasad wadaag leyihiin.
Waxaa farxad ah in maalinba maalinka ka danbeeya ay sii badaneyso fahamka shucuubta caalamka ee ku aadan gumeystaha iyo qadiyada Ogadena ay tahay meelaha inta badan tusaalaha loogu soo qaato. Waxaa sidoo kale faraxad wayn u ah shacabka rer Ogadenia in dawlada iyo shacabkaSweden aad u barteen isla markaana ay fahansanyihiin waxa uu rabo shacabka Somalida Ogadenia.